7 Mitambo uye kunyorera mahara kana nechisvinu chikuru kutanga vhiki kubva kurudyi (Ndira 16) | IPhone nhau
Nhasi kunotanga svondo idzva; Tine mazuva mashanu ebasa pamberi pedu asi, kuti tikufare mukutambudzika uku, nhasi ndinokuunzira sarudzo yakanaka yemangwanani uye mitambo yeApple uye / kana iPad yeavo vanobhadharwa asi ikozvino, kana uchikurumidza, Iwe unogona kuitora iyo yemahara zvachose kana, zvirinani, neinotapira dhisikaundi.
Asi sezvatinogara tichinyevera, usarase kuona kuti uku kushambadzira kwaunozoona pazasi kuchashanda Nguva Yakatemwa, ndiko kuti, ini ndinogona kungovimbisa chete kuti vari kushanda panguva yekutsikisa ichi chinyorwa, asi isu hatizive, kunze kwekushoma, kuti vachashanda kwenguva yakareba sei nekuti vanogadzira havawanzo kuikurukura. Naizvozvo, kana mutambo kana chikumbiro zvichikufadza, kurumidza utore mukana iwoyo.
1 Mhepo Mifananidzo
4 Tungoo - Bubble rinoputika rakamira platformer
6 Mental Hospital IV
7 Textever - manotsi anokurumidza eEvernote
Mhepo-Mifananidzo iko kunyorera kwaungagone ona mafoto kubva ku iPhone yako kana iPad zvakananga pakombuta yako, kuburikidza neWi-Fi, uye pasina kuita chero yapfuura kuwiriranisa. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa zvakare kuisa iyoPhotoPhotoServer yekuwedzera pane yako Mac, chishandiso icho zvakare chemahara chaunogona kuwana pano.
Pakati pezvakakosha zvinhu, zvinoratidzika kuti unogona kuona zvigunwe nemifananidzo zvakanangana mubrowser yako Mac, kurodha mifananidzo, kana kuti inosanganisira rutsigiro rweAirPlay uye AirPrint.
Mhepo-Mifananidzo ine mutengo wenguva dzose we2,99 euros, zvisinei, ikozvino unogona kuiwana mahara.
FotoMed chirongwa chehutano chisina kukodzera ma hypochondriacs. Naye tinokwanisa tarisa kumusoro ruzivo rwekurapa kubva kumifananidzo. Ruzivo urwu rwunopihwa neMedlinePlus, sevhisi yeUnited States National Library.
Mamwe emabasa ayo makuru ndeaya:
Tsvaga ruzivo rwechiremba nemifananidzo inoratidzira. FotoMed inokupa iwe yakazvimirira yekutsvaga yekushandisa yezvekurapa ruzivo, kunyanya mifananidzo yekurapa, kubva kune anovimbwa mawebhusaiti.
FotoMed inobatsira iwe kuteedzera yako wega ekurapa mifananidzo uye mifananidzo iwe yaunowana pawebhu.
FotoMed inokutendera iwe kuenzanisa pikicha yako nehutano uye zvekurapa mifananidzo kubva kune yakavimbika web zviwanikwa, kana kuenzanisa ako ako mafoto (senge ganda mamiriro) akatorwa panguva dzakasiyana.
Mukati meFotoMed, unogona kutora mifananidzo nekamera yefoni […] zoom in / out, rotate […] kuti uone zvirinani. Iwe unogona kubata mufananidzo kuti uutarise zvakanyanya pachena. Izvi zvinokutendera kuti uenzanise miviri inopindirana mifananidzo.
FotoMed ine mutengo wenguva dzose we0,99 euros, zvisinei, ikozvino unogona kuiwana mahara.
WebDisk shandura yako iPhone, iPad kana iPod Kubata mu "virtual hard drive" iyo iwe yaunogona kuwana kubva kune yako Mac kana PC browser kuti uone uye / kana kurodha mafaera ako.
WebDisk ine mutengo wenguva dzose we0,99 euros, zvisinei, ikozvino unogona kuiwana mahara.
Tungoo - Bubble rinoputika rakamira platformer
"Tungoo chiitiko chisina musono chakamira chinotangira pasi uye chinopera kumucheto kwenzvimbo"; chinangwa chako chinenge chiri chekudya matema. A juego yakapusa sezvo iri muropa, uye zvakare zvekare.
Tungoo Iyo ine mutengo wenguva dzose we5,99 euros, zvisinei, ikozvino unogona kuiwana zvachose mahara.
“Kudzikira kunoshandisa Unity3D ginjini injini kuburitsa kunzwa nekuzara kwenyika. Iwe uchanyudzwa mune isinganzwisisike nyaya, mhedzisiro yacho iri zvachose kwauri. Sango reAmazon, gwenga, mapako, Europe, nzvimbo dzese idzi uchafanirwa kukunda nesimba rako nehungwaru, nekuti hapana wekubatsira ... »
The Descent Iine mutengo wenguva dzose we1,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana ine 50% dhisikaundi kune ma0,99 euros chete.
Mental Hospital IV ine mutengo unowanzoitika we1,99 euros, zvisinei, ikozvino unogona kuiwana ne50% dhisikaundi ye0,99 euros chete.
Mental Hospital IV0,99 €
Textever - manotsi anokurumidza eEvernote
Textever iko kushandisa kunokubvumira kurumidza uye nyore kugadzira, gadzirisa uye tumira ako mavara zvinyorwa ndege iyo iwe yaunogona zvakare "kuwedzera cheki mabhokisi, mifananidzo, misi, nguva, zviyeuchidzo, mabara, zvinyorwa ...", kunyangwe iri kunze kwenyika modhi.
Inoenderana pakati pemidziyo yako yese kuburikidza neEvernote, kubva kwaunogona kuendesa manotsi.
Textever - manotsi anokurumidza eEvernote Iine mutengo wenguva dzose we4,99 euros zvakadaro, ikozvino unogona kuiwana ine 80% dhisikaundi kune ma0,99 euros chete.
Textever - manotsi anokurumidza eEvernote4,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » 7 Yemahara kana yakadzikiswa zvakanyanya mitambo uye maapplication ekuti vhiki iite kutanga kwakanaka (Ndira 16)